Ukubuyisela ifoto endala nge Photoshop ukuyinika ubomi obutsha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Buyisela ifoto endala nge Photoshop ukuyinika ubomi Ubune gcina iifoto ezindala ezazikholelwa ukuba zilahlekile ngenxa yokuhamba kwexesha kunye neziphumo zalo kwimifanekiso yakudala apho itekhnoloji ibisilela kunangoku. Uninzi lwethu luneefoto zobuntwana emakhaya kunye nezinye ibala, imibimbi okanye uhlobo oluthile lwempazamo esingathanda ukuba sikwazi ukulungisa xa ufaka imifanekiso kwikhompyutha. Photoshop isenokuba yi usindiso yengxaki yethu.
Funda uku lungisa iifoto zakho ezindala ngendlela elula nge Photoshop usebenzisa ezinye zezixhobo eziqhelekileyo xa usenza olu hlobo lomsebenzi. Lungisa iibhugi, phucula umbala, ugqibe imifanekiso yakho kunye buyisa ebomini imifanekiso yakho yobuntwana.
ukuba buyisela umfanekiso Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukuyigcina kakuhle kwaye sithathe isigqibo ngendlela esiza kuyenza ngayo into yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kangangoko kunokwenzeka, into edla ngokwenziwa ekubuyiseleni kukukhuphela iindawo ezisempilweni ngaphandle kokuwohloka kwaye uzincamathisele kwiindawo ukuwohloka. Sijonga umfanekiso wethu kwaye sigqibe ekubeni senze njani ukubuyisela.
Kanye phakathi Photoshop Into yokuqala esiza kuyenza kukukhetha enye buyisela isixhobo, Photoshop inezi zinto zilandelayo:
Nganye kwezi herramientas isebenza ngendlela eyahlukileyo kwaye ineendawo zayo ezilungileyo nezingalunganga, ngenxa yesi sizathu eyona nto iyiyo yile dibanisa konke ngokweemfuno zethu.
Siza kuchaza ukuba ezinye zazo zisebenza njani kwaye zenziwa njani ukubuyiselwa yomfanekiso kuthotho lwamanyathelo.
Kuqala silungisa ukusilela komzimba yomfanekiso (amabala, ikhefu ... njl.
Okwesibini silungisa imibala ebengezelayo yomfanekiso (imibala, izibane, izithunzi ... njl.
Inxalenye yokuqala yokubuyiselwa kufuneka ijolise ekulungiseni iimpazamo zomzimba kunye nenxalenye yesibini kuyo ukuchaneka kombala ngokuchanekileyo ukubuyela ku zisa umfanekiso ebomini.
Masiqalise lungisa iibugs ngesixhobo clone buffer, into eyenziwa sesi sixhobo kukuthatha isampulu yomfanekiso kwaye uyikope kwenye indawo. Kufuneka sihlale sikhumbula le miba ilandelayo yesi sixhobo: ukukhanya, ukuhamba kunye nobulukhuni. Into eqhelekileyo kukudlala ngale miba ukuya yenza i-retouching ibe yeyobuqili kakhulul, i-opacity esezantsi kunye nobunzima, kokukhona i-retouch iya kuqapheleka. Sisebenzisa esi sixhobo Ukucinezela isitshixo se-alt ukuthatha isampulu yomfanekiso, kamva sikopa isampulu kwenye indawo emfanekisweni, eyona nto ilungileyo kukuthatha iisampulu kufutshane nendawo yekopi.
La Isixhobo sepatch ivumela ukuba sikhethe kwaye emva koko yenza uhlobo lwesiziba, Esi sixhobo sinokukhetha ezimbini: imvelaphi kunye nendawo ekuyiwa kuyo, ukhetho lokuqala lusivumela ukuba senze ifayile ye- ukhetho ngempazamo kwaye utshintshe lo mmandla ube ngowonakeleyo. Inketho yesibini isivumela ukuba senze ngokuchaseneyo, sikopa impazamo ekhethiweyo kwaye siyikopishe sibuyele kwenye indawo (kule meko eli candelo aliloncedo). Umsebenzi ulula, senza ukhetho lwendawo esifuna ukuyibuyisela kwaye kamva sitsale olo khetho kwindawo engekude eyonakalisiweyo.
Kufuneka silumke gcina amanqaku aphezulu kunye nezithunzi zomfanekisoIcandelo ngalinye linokukhanya okuthile kunye nezithunzi, ngenxa yeso sizathu iisampulu esizenzayo kufuneka zisondele kwimpazamo ukugcina oku. Umzekelo ukulungisa indawo yamehlo Kuya kufuneka siqokelele iisampulu kuphela kule ndawo.
Ukususa i imiphetho eyaphukileyo (kwimeko yokuba nabo) esinokukwenza kukunciphisa umfanekiso kancinane nge isixhobo sesityalo.
Nje ukuba silungise iimpazamo ezibonakalayo emfanekisweni, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuqala umbala ochanekileyo, Ngale nto sinothotho lwezixhobo.
ukuba iinwele ezichanekileyo kunye nendawo eneenkcukacha eyona nto ilungileyo kukwenza ukhetho olukhethiweyo Yale ndawo ukuyinyanga kamva, oku kunokwenziwa ngesixhobo imaski ekhawulezayo. Njengokuba ibrashi, sipeyinta indawo esifuna ukuyilungisa (inombala obomvu ngokuzenzekelayo) emva kokwenza ukhetho, siphinda sicinezele kwi icon yemaski ekhawulezayo kwaye iya kwenza ukhetho lwayo yonke into esingayipeyinti. , ngenxa yeso sizathu kufuneka uye kwimenyu ephezulu kwaye ucofe ekukhetheni / ekubuyiseleni ukuhlala kuphela nezinto esizikhethileyo ngebrashi.
Ukulandela oku senza uhlengahlengiso / ulungiso olukhethiweyo. Kweli candelo sinako imibala echanekileyo ngokuthe ngqo. Eli candelo linokusetyenziswa kwindawo nganye yomfanekiso ukuba sifuna ukulungisa imibala ngokuchanekileyo. Ngokufanelekileyo xa sisenza oku kukusebenzisa ubunzima bebrashi esezantsi kwimiphetho kunye nobulukhuni bendawo yangaphakathi.
Into elandelayo esinokuyenza ukuphucula umgangatho wokubonwayo yokufota kukusebenzisa ezinye iindlela onokukhetha kuzo Photoshop ukulungisa umfanekiso:
Singazisebenzisa ezinye zezi zixhobo ukwenza qhubeka ugqibelele umgangatho womfanekiso wethu. Zonke ezi zilungiso zinokwenziwa ngokuchanekileyo ukuba nje senza inyathelo lokukhawulezisa imaski kuqala.
La ingcebiso xa usenza ukubuyisela Izama ukuyenza kancinci kancinci, ijolise kakuhle kwiinkcukacha kwaye ihlala izama ukusebenza indawo nganye ngokwahlukeneyo ngokukhetha okuthile. Awusenasizathu sakubuyisela zonke iifoto zosapho onazo ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Buyisela ifoto yakudala nge-Photoshop
Iindlela ezikhoyo ngoku kuyilo lwegraphic